बाबुबाटै बलात्कार ! «
बाबुबाटै बलात्कार !
छोराछोरीको संरक्षण तथा रेखदेख बाबुको कर्तव्य हो । नेपालीको सामाजिक संरचनालाई हेर्दा पनि बाबुलाई परिवारको मुली मानिन्छ । तर, मोरङको बेलबारी नगरपालिकाकी १४ बर्षीया बालिकाका लागि आफ्नै बाबु ‘बलात्कारी’ बने ।
बुबाले आफूलाई पटक–पटक बलात्कार गरेको घटना बालिकाले सार्वजनिक गरेकी छन् । कक्षा ९ मा अध्ययनरत उनले बुधबार झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नै बुवाले ११ वर्षको उमेरदेखि बलात्कार गरेको बताइन् ।
“यो घटनाको विषयमा मैले ममिलाई भने, ममिले गम्भिर रुपमा लिनुभएन । बुबाले यो कुरा बाहिर ल्याए पुलिसले तलाईँ लान्छ, कसैले हेर्दैन भनेर डरसमेत देखाउनुभयो” उनले भनिन्, “त्यही भएर मैले ३ वर्ष अघिदेखिको यो कुरा अरुलाई सुनाउन सकिन ।” आफूलाई बुबाले चार पटकसम्म बलात्कार गरेको उनी सुनाउँछिन् ।
गत भदौ ४ गते उनले इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा बाबुविरुद्ध जवरजस्ती करणीमा जाहेरी दिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका प्रहरी निरीक्षक सरोज खनालले बताए । “जाहेरी परेसँगै मुद्धा दर्ता पश्चात, कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी हामीले अदालतमा बुझाएका थियौ” खनाल भन्छन् ।
मोरङ जिल्ला अदालतले ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा पीडकलाई छाडिसकेको छ । “प्रहरीले बुबालाई पक्राउ ग¥यो । तर, अदालतले छोड्यो, मैले घटना सुनाउने हिम्मत त गरे, न्याय भने पाइन,” पीडीत बालिका भन्छिन् ।
गम्भिर प्रकृतिको घटना भए पनि आफूलाई कुनै पनि जानकारी नदिई मोरङ जिल्ला अदालतले श्रीमान्लाई धरौटीमा छाडेकाले छोरीले न्याय नपाएको पीडीत बालिकाकी आमा बताउँछिन् । किशोरीका बुबा नेपाल आर्मीबाट रिटायर हुन् ।
श्रीमानले ३ जनालाई विवाह गरेको पीडित बालिकाकी आमा बताउँछिन् । “उहाँ नेपाल आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो । विवाह गरेको छैन भनेर मसँग विवाह गर्नुभयो । पछि थाहा पाउँदा त पहिले नै दुई जना श्रीमती रहेछन्” उनले भनिन्, “पहिले नै विवाह गरेको थाहा पाएपछि म झापाको बिर्तामोड बस्न थालेँ । छोरीलाई भने श्रीमान् कै घरमा राखेँ । त्यहीबेला छोरी माथि यस्तो घटना घटेछ ।” आफूलाई सुरुमा विश्वास नै नलागेको उनको भनाइ छ । “पछि–पछि छोरीको व्यवहारमा पनि चेन्च पाए, स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर हुँदै गयो । यसपछि मात्र घटनाको वास्तविकता थाहा पाएँ” उनले भनिन् ।
मृत्यु भइसकेकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा
उदयपुरको रामपुर ठोक्सिला गाविसका तत्कालीन सचिव केशवप्रसाद आचार्यसहित पाँचजनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक अनियमितता
अनुदानको चामल भक्तपुर पठाउनेलाई जरिवाना
नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी सुर्खेतको गोदामबाट मुगुका लागि ढुवानी गरिएको अनुदानको चामल भक्तपुर पठाउने
संखुवासभा हत्याकाण्डका अभियुक्त सार्वजनिक
संखुवासभाको मादी नगरपालिका–१ खोला गाउँमा एकै परिवारका ६ जनाको हत्याका अभियुक्तलाई आइतबार प्रहरीले सार्वजनिक गरेको
नक्कली नेपाली नोटसहित पाँच कारोबारी पक्राउ
प्रदेश दुईका विभिन्न बजारमा एक हजारका नक्कली नेपाली नोट भएको आशंका प्रहरीले गरेको छ ।
झुटो विवरण पेस गरेर नागरिकता लिएको खुलासा, पाँचजना पक्राउ
सिन्धुलीका एक व्यक्तिले झुटो विवरण पेस गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुबाट नागरिकता लिएको तथ्य बाहिर